Igwe anaghị agba nchara Tactile ibe, Brass Tactile Studs, oze Tactile ibe - JBP
Anyị bụ ndị a alaka ụlọ ọrụ nke JBP GROUP (HK) CO., Limited. Na ihe karịrị afọ 16, ndị ọgaranya na ahụmahụ na-eme tactile n'ala n'elu-egosi na ndị ọzọ na CNC machined metal ngwaahịa. Anyị isi ahịa na-aga site na Australia, New Zealand, Japan, USA, Germany, France na ndị ọzọ na mba Europe. Anyị na-nyere na elu na ngwá na anyị ruru eru oru pesonel ana achi achi anyị elu larịị R & D ike.
Ihe anyị na ngwaahịa na-agụnye: Marine mezuwo igwe anaghị agba nchara, ọla, ọla kọpa, aluminum, zinc alloy na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi roba na plastic.
The predominance anyị factory ụgha dị ka ndị a:
1, Anyị nwere 16 afọ 'ọgaranya ahụmahụ n'ichepụta metal akụkụ na-eduga R & D ike. Anyị isi ahịa bụ Europe, North America, Australia na Asia. Anyị nwere ike inye àgwà ngwaahịa dị na iwu obodo na iwu.
2, anyị anọwo na imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ike multinationals maka afọ. E nwere ihe karịrị afọ 20 nwetara technicians ndị maara nke ọma banyere ngwaahịa. N'ihi ya, anyị nwere ike obi sie gị na anyị na-enwe na-enye àgwà ngwaahịa dabeere na ngwa ngwa nnyefe.
3, The ruru eru injinia anyị mmepụta ihe nwere na-atụ aro na gị ndụmọdụ maka ụfọdụ ndị ọhụrụ-e oru ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Anyị bụ ezi na emebe na mara nke ọma banyere ngwa nke anyị isi ngwaahịa.
4, Anyị nwere mbubata na mbupụ ikike.
5, E nwere ọtụtụ anụ sub-ngo na-enye ndị anyị ụfọdụ ihe si ngwaọrụ ndị ọzọ.
Anyị factory emi odude ke Cixi, na nsọtu Ndida nke Hangzhou Bay Bridge, ya bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ akwa n'elu oké osimiri. Ọ bụ naanị otu onye na ọkara otu awa si Pudong Airport na 1 hour si Xiaoshan Airport, ọkara otu awa si Ningbo Airport anyị factory ụgbọala. Ọ bụrụ na ị na-abịa ileta anyị, biko kpọtụrụ anyị maka atụtụ.
Kwesịrị na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko egbula kpọtụrụ anyị.
Zọ akụkụ / CNC zọọ akụkụ / mpempe akwụkwọ meta ...
TGSI-006 igwe anaghị agba nchara tactile studs / warni ...
Rubber akụkụ / kpụrụ roba akụkụ / ịkpụzi ru ...